स्कोडा कुशकको शुरुवाती मूल्य ४९ लाख ९० हजार – खबर नेटवर्कस्
खबर नेटवर्कस् > खबर नेटवर्कस् > स्कोडा कुशकको शुरुवाती मूल्य ४९ लाख ९० हजार
स्कोडा कुशकको शुरुवाती मूल्य ४९ लाख ९० हजार
पोष्ट गरिएको साउन. ०३, २०७८ मा ८:३० मध्यान्ह साउन ३, २०७८
प्रकाशित मिति : 18 July, 2021
काठमाडौं । नेपालका लागि स्कोडाको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले बहुप्रतिक्षित एसयुभी स्कोडा कुशकको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।
एक्टिभ, एम्बिसन र स्टाइल गरी ३ ट्रिम र ५ भेरियन्टमा उपलब्ध हुने कुशकको शुरुवाती मूल्य ४९ लाख ९० हजार रुपैयाँदेखि ६५ लाख ९० हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।
एमएडब्लुले नयाँ स्कोडा कुशकका लागि दुई साताअघि नै बुकिङ खुला गरिसकेको छ । नेपाली ग्राहकले साउन ११ गतेदेखि कुशकको टेस्ट ड्राइभ गर्न पाउनेछन् ।
स्कोडा कुशकमा १.० लिटरको सबैभन्दा बढी पुरस्कृत टीएसआई इन्जिन हुनेछ । जसले ११५ बीएचपी र १७८ एनएम टर्क उत्पन्न गर्नेछ जुन सेग्मेन्टमै सबैभन्दा बढी हो । टीएसआई इन्जिन ६ स्पिड म्यानुअल र अटोमेटिक ट्रान्समिसनमा उपलब्ध हुनेछ ।
रोबस्ट र मस्कुलर लुक रहने कुशकले नेपाली एसयुभीप्रेमीको मन जित्ने अपेक्षा गरिएको छ । कुशकको अगाडिको भागमा चौडा र अद्वितीय स्कोडा ग्रिल, डुअल हेलाइट सेटअप, एलईडी डिआरएल र फग ल्याम्प हुनेछ । साथै यसमा रुफ रेल र १७ इन्चको डाइमन्ड कट एलोइ ह्विल हुनेछ । साथै, पछाडिको भागमा स्प्वाइलर, फक्स लिस्भर डिफ्युजर, र्याप–अराउन्ड एलडी टेललाइट रहनेछ ।
यसको इन्टेरियर चालकलाई सहज बनाउन राखिएको ‘सिम्प्ली क्लेभर’ फिचर भएको आधुनिकता र सुन्दरताको उत्कृष्ट संयोजन हुनेछ । यसमा १०.० इन्चको टचस्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम, सनरुफ, भेन्टिलेटेड सिट, एम्बायन्ट लाइटिङ, कुल्ड ग्लोबबक्स, ५० वाटको सबवुफरसहितको सिक्स स्पिकर पनि रहनेछ ।
साथै, सुरक्षाका लागि यसमा ६ एअरब्याग, रियर पार्किङ क्यामेरा, आइसोफिक्स चाइल्ड सिट माउन्ट, अटो हेडल्याम्प र वाइपर र मल्टिकोलिजन ब्रेकिङ सिस्टम पनि हुनेछ । साथै इएससी सबै भेरियन्टमा हुनेछ जुन सेग्मेन्टमै पहिलो हो । साथै यसमा टायर प्रेसर मनिटरिङ र हिल होल्ड असिस्ट पनि हुनेछ ।
Tags:अटोमेन स्टोरी राइट
क्लिकमाण्डु साउन ३, २०७८
सिभिल बैंकले ऋणपत्र जारी गर्न ४ वटा प्रत्याभुतिकर्ता चयन गर्यो
प्रधानमन्त्री देउवाले पाए विश्वासको मत, पक्षमा १६५ मत, विपक्षमा ८३
स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीको फोटोबारे पश्चिमा मिडियासँग किन भड्कियो चीन ?
सगरमाथा सिमेन्ट अब २५ केजीको हाफ प्याकमै पाइने
नबिल बैंकको ऋणपत्रमा लगानी गर्दा ८% व्याजदर पाइने, धितो राखी कर्जा लिन सकिने
२४ घण्टामा २२३७ जना कोरोना संक्रमित थपिए, २०५० संक्रमण मुक्त
काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० दिन निषेधाज्ञा थपियो, यी क्षेत्रमा कडाई (सूचनासहित)